Korean Cosmetics Brand Vella Zvino Inowedzera muJapan
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Korean Cosmetics Brand Vella Zvino Inowedzera muJapan
Vella yakavhura chitoro chayo chepamutemo papuratifomu hombe yeJapan e-commerce 'Qoo10' uye yakazivisa kuti ichatengesa zvigadzirwa zvinozorodza, zvakachena zverunako nezvigadzirwa zvayo zvemureza zviri zvigadzirwa zvevegan zvinosanganisira Vella Ultra Hydro Sun Essence.
Vella ndiyo yekutanga skincare brand muKorea kuvhura mutsara wekutarisira chigadzirwa uye yakatengesa zvinopfuura miriyoni zvigadzirwa, ichimisa chinzvimbo chayo muKorea.
Kuburikidza nekuvhurwa zviri pamutemo uku, vatengi veJapan vanogona zvakare kutenga Vella Ultra Hydro Sun Essence kuQoo10. Vella Ultra Hydro Sun Essence ndiyo No. 1 zuva essence uye zuva rekuchengetedza chigadzirwa chinogona kushandiswa gore rose paWadiz.
Kupemberera kuvhurwa kwechitoro chepamutemo, Vella ari kupa 20 muzana kuderedzwa kusvika Mbudzi 26 kuburikidza nechiitiko chikuru chekuderedzwa paQoo10.
Zvichakadaro, Vella iyo yakawedzera mumusika weJapan kutanga kubva kuJapan inotungamira yekutengesa online papuratifomu Qoo10, iri kuwedzera kusvika kwayo kwepasirese nekupinda mumatunhu ega e-commerce mapuratifomu akadai seShopee, hombe yepamhepo kutengeserana chikuva muSoutheast Asia, uye Amazon, kambani hombe pasi rose e-commerce.